सुशान्तको दे… त्याग गर्नुका कारण यस्तो, ३ दिन पछि खुल्यो बलिउडमा तरङ्ग ल्याउने नयाँ रहस्य ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /International/सुशान्तको दे… त्याग गर्नुका कारण यस्तो, ३ दिन पछि खुल्यो बलिउडमा तरङ्ग ल्याउने नयाँ रहस्य !
7,1135minutes read
अभिनेत्री कंगना रनौत बलिउडकी निडर अभिनेत्रीको रुपमा चिनिन्छिन्। उनले खुलेरै बलिउडमा भएको नातावाद र कृपावादको विरोध गर्ने गरेकी छन्। अभिनेता सुशान्त १४ जुनमा बान्द्रास्थित आफ्नै अपार्टमेन्टमा मृत भेटिएका थिए। उनले देह त्याग गरेको प्रहरीले बताएको छ